Oradyahan Itoobiyaan ah oo mudaaharaad ka dhigaya tartanka London - BBC News Somali
Oradyahan Itoobiyaan ah oo mudaaharaad ka dhigaya tartanka London
Image caption Oradyahanku wuxuu sheegay in la dili doono haddii uu Itoobiya ku laabto
Oradyahanka reer Itoobiya ee dibad jooga ah Feyisa Lilesa ayaa wacad ku maray in uu dawladda ku mudaaharaadi doono Axadda marka magaalada London lagu qabto tartanka orodka ee Maaratoonka, isaga oo sheegay in uu "dhiig ka qulqulayo" dhulkiisa hooyo.
Feyisa ayaa dareenka caalamka qabsaday markii tilmaan mudaaharaad sameeyay isaga oo ka talaabaya xariijintii u dambaysay ee tartankii maaratoonka ee 2016kii lagu qabtay magaalada Rio ee dalka Brazil.
Calaamadaas mudaaharaadka ayuu ku taageeray dadkii Oromada ahaa ee dawladda ku mudaaharaadayay.
Waraysi uu siiyay qaunta ciyaaraha ee BBC ayuu ku sheegay in uusan ka shalaayin ficilkiisa.
Wuxuu sheegay in uusan Itoobiya ku laaban doonin inta ay talada hayso xukuumadda hadda jirta maadaama oo si toos ah loo dili doono ama loo xiri doono amaba loo diidi doono in uu mar dambe dalka ka baxo.
Feyisa ayaa diiday in uu Itoobiya ku laabto ka dib markii uu dhamaaday tartankii uu Brazil kaga qaybgalay, inkastoo ay dawladdu sheegtay in sidii halyay loo soo dhawayn doono.
Image caption Calaamadda X ayaa astaan u hayd mudaaharaadka lagu diidan yahay dawladda
Hadda wuxuu ku nool yahay dalka Maraykanka isaga oo ay ku weheliyaan xaaskiisa iyo carruurtiisa wuxuuse ku joogaa dal ku gal aan degenaansho ahayn.
Feyisa markii uu kaalinta labaad ku galay Rio wuxuu noqday ninkii u horeeyay ee oradka maratoonka labada kaalmood ee u horeeya ka gala tan iyo 2000.
Feyisa Lilesa biladda Oradka kuma waayayo in uu Itoobiya ku mudaaharaaday
Itoobiya oo xirtay hogaamiye mucaarad ah oo caan ah
Desalegn oo ka hadlay dadkii ku dhintay Itoobiya
Dhimashada dibadbaxyada Itoobiya
Waxaa kaalinta koobaad ka qaaday Eliud Kipchoge oo reer Kenya ah.
Markii uu xariijinta ka sii tallaabayay ayuu gacmaha isu dhaafiyay sida xarafka X, isla calaamaddaas ayaana astaan u ahayd mudaaharaadyada dadka Oromada ah oo ah qawmiyadda ugu badan ee Itoobiya, taas oo gacan adag kala kulantay dawladda Itoobiya.
Maqal Haweenka Soomaalida Itoobiya oo door wayn ciyaaray
23 Agoosto 2016
Merkel oo Itoobiya uga digtay in la isticmaalo xoog badan
11 Oktoobar 2016
Itoobiya iyo Djibouti oo furay tareen isku xiraya labada waddan
Maxkamad ku taal Itoobiya oo Soomaali xabsi ku xukuntay
Itoobiya oo qawaaniin cusub soo rogtay
Mudaaharaadyada oo Itoobiya ka sii socda
5 Agoosto 2016
Itoobiya oo ciidamo dheeraad ah u daad gureyneysa dhammaan qeybaha dalkeeda
Weerar lagu qaaday warshad ku taalla Itoobiya oo uu leeyahay ninka ugu taajirsan Afrika